ဆောင်းပါး > Josepf Tkach ၏ > ဘုရားသခင့နေဆဲချစ်မိပြီဆိုရင်?
ဘုရားသခင်သည်များစွာသောသူတို့ကိုချစ်နေဆဲဖြစ်သည်ကိုခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်နေကြသည်ကိုလုံးဝမသိကြောင်းသင်သိပါသလား။ ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနှင်ထုတ်လိမ့်မည်ဟု ပို၍ စိုးရိမ်သည်။ သင်အလားတူကြောက်ရွံ့မှုမျိုးရှိနိုင်သည်။ ခရစ်ယာန်တွေကဘာကြောင့်ဒီလောက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြတာလဲ။
အဖြေမှာရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ သူတို့၏အမှားများ၊ အမှားများ၊ သူတို့၏အပြစ်များကိုသူတို့နာကျင်စွာခံစားနေရသည်။ ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်နှင့်သူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းပင်ဘုရားသခင့်စကားကိုနားထောင်ခြင်းအပေါ်များစွာမူတည်ကြောင်းသူတို့သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း၊ ဘုရားသခင်အားခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်း၊ သူတို့ကနက်ရှိုင်းသော၊ အတွင်းစိတ်စိတ်ကိုနိုးထစေလျှင်သူတို့၏နောက်သို့လှည့်မသွားဘဲဘုရားသခင်ကိုအလွန်ဝမ်းနည်းကြောင်းနှင့်ခွင့်လွှတ်မှုတောင်းခံနေကြသည်။
ဒါဟာငါ့ကို Hamlet, ရှိတ်စပီးယားကပြဇာတ်၏သတိပေးနေပါတယ်။ ဒီပုံပြင်မှာတော့မင်းသား Hamlet ကသူ့ ဦး လေး Klaudius ဟာ Hamlet ရဲ့ဖခင်ကိုသတ်ပြီးနန်းတော်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့သူ့အမေနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ် ရလဒ်အနေနှင့် Hamlet သည်သူ၏ ဦး လေး / ပထွေးကိုလက်စားချေရန်လျှို့ဝှက်စွာကြံစည်နေပါသည်။ အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရလာပေမယ့်ဘုရင်ကဆုတောင်းနေတုန်း Hamlet ကတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်။ Hamlet က“ အကယ်၍ သူ့ကိုငါ ၀ န်ခံပြီးသတ်မယ်ဆိုရင်သူကကောင်းကင်ကိုသွားလိမ့်မယ်။ "သူကထပ်မံအပြစ်ပြုပြီးနောက်သူ့ကိုငါသတ်ပြီးသတ်ပစ်မယ်၊ ဒါပေမဲ့သူမသိဘူးဆိုရင်သူငရဲသွားလိမ့်မယ်" လူများစွာသည် Hamlet ၏ဘုရားသခင်နှင့်လူသားတို့၏အပြစ်အကြောင်းအတွေးများကိုဝေမျှကြသည်။
သူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါသူတို့သည်နောင်တမယူဘဲယုံကြည်ခြင်းမပြေလည်လျှင်ဘုရားသခင်နှင့်လုံးဝကွဲကွာသွားပြီးခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည်သူတို့အတွက်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဤအမှားကိုယုံကြည်ခြင်းကသူတို့ကိုနောက်ထပ်အမှားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူတို့သည်အပြစ်ထဲသို့ပြန်လည်ကျရောက်တိုင်းဘုရားသခင်ကသူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့ထံမှဖယ်ရှားပေးမည်ဖြစ်ပြီးခရစ်တော်၏အသွေးသည်၎င်းတို့ကိုဖုံးအုပ်တော့မည်မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့်လူတို့သည်သူတို့၏အပြစ်များကိုရိုးသားစွာပြောဆိုကြသောအခါခရစ်ယာန်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုသူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းရှိမရှိသိလိုကြသည်။ ဤအရာအလုံးစုံသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်theဝံဂေလိတရားသည်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
Das Evangelium sagt uns nicht, dass wir von Gott getrennt sind, und dass wir etwas tun müssen, damit Gott uns seine Gnade gewährt. Das Evangelium sagt uns, dass Gott der Vater in Christus alle Dinge, einschliesslich Sie und mich, einschliesslich aller Menschen (Kolosser 1,19-၂၀) ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်း။
Es gibt keine Barriere, keine Trennung zwischen Mensch und Gott, weil Jesus sie niedergerissen hat, und weil er in seinem eigenen Wesen die Menschheit in die Liebe des Vaters hineingezogen hat (1 Johannes 2,1; ယော ၁2,32) တစ်ခုတည်းသော အတားအဆီးမှာ စိတ်ကူးယဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် (ကောလောသဲ 1,21), die wir Menschen durch unsere eigene Selbstsucht, Angst und Unabhängigkeit aufgerichtet haben.
oved ၀ ံဂေလိတရားသည်ဘုရားကိုကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့ပြောင်းလဲစေသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်ယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သည် သို့မဟုတ် မလုပ်သည့်အရာအပေါ်တွင် မမူတည်ပါ။ ဧဝံဂေလိတရားသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်၌ ထင်ရှားပေါ်လွင်သော လူသားအားလုံးအတွက် ခမည်းတော်၏ အတားအဆီးမရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကြေငြာပြီးဖြစ်သည့် အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို ကြေငြာချက်ဖြစ်သည်။ သင် မည်သည့်အရာကိုမျှ နောင်တရခြင်း သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းမရှိမီတွင် ဘုရားသခင်သည် သင့်အား ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပြီး သင် သို့မဟုတ် အခြားမည်သူ့ကိုမျှ မည်သည့်အရာကမျှ ပြောင်းလဲမည်မဟုတ် (ရောမ၊ 5,8; 8,31-39) ။
၀ ံဂေလိတရားသည်ခရစ်တော်နှင့်ဘုရားသခင့်လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တကယ့်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်လိုအပ်ချက်အစုတစ်ခု၏ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဘာသာရေးသို့မဟုတ်သမ္မာကျမ်းစာဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားအသိဥာဏ်ရှိရှိလက်ခံခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်သည်ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ရာနေရာ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရပ်တည်ပေးရုံသာမက၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ချစ်သားများဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူကိုယ်တိုင်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
Es ist niemand anders als Jesus, unser Erlöser, der alle unsere Sünden auf sich nahm, der auch durch den Heiligen Geist in uns «das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen» wirkt (Philipper 4,13; ဧဖက် 2,8-10). Wir können uns aus ganzem Herzen hingeben, um ihm nachzufolgen, im Wissen, dass er uns bereits vergeben hat, wenn wir versagen.
Denken Sie darüber nach! Gott ist nicht eine «Gottheit, die uns weit weg, dort draussen im Himmel beobachtet», sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist, in dem Sie und alle anderen leben, weben und sind (Apostelgeschichte 17,28) သင်မည်သူဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်ပြုသည်ဖြစ်စေ ခရစ်တော်အားဖြင့် လူ့ဇာတိအားဖြင့်ကြွလာ၍၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ငါတို့၏ဇာတိခန္ဓာ၌ကြွလာတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်ပြုသောအမှုတို့ကို လွန်စွာချစ်တော်မူ၏။ သင်၏အပြစ်များကို ကယ်တင်သောကျေးဇူးတော်အားဖြင့် သင့်အား အနာရောဂါငြိမ်းစေတော်မူ၏။ သင်နှင့်သူကြားရှိ အတားအဆီးတိုင်းကို သူဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ခရစ်တော်နှင့်အတူရင်းနှီးသောမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စုံလင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဘ ၀ ၌နေထိုင်ခြင်းမှရရှိသော ၀ မ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတိုက်ရိုက်မခံစားရစေရန်ခရစ်တော်၌ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုသင်ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ အခြားသူများအားဝေငှရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ပေးခဲ့သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောသတင်းစကားပါတကား။